SAMBAVA : Zazavavy kely vao 12 taona monja bevohoka naolan-draikeliny
Sivy volana lasa izay, fandrahonana ho faty sesilany no nataon’ny sakaizan-dreniny tamin’ity tovovavy kely vao 12 taona monja mipetraka any Sambava. 11 septembre 2015
Tsy navelan’ilay rangahy hiteny tamin’iza tamin’iza indrindra fa tamin-dreniny ny fanolanana nataon-draikeliny azy izy.
Miaina izany isan’andro ity voatavo tsy mifandraka ity, ka tsy sahy nitantara ny nanjo azy tamin-dreniny mihitsy. Taty aoriana, tsy nahatanty izany intsony rakalakely ka naborany tamin’ny fianakaviany ihany ny zavatra nanjo azy. Ireto farany nandray ny fanapahan-kevitra ka nitory tany amin’ny mpitandro ny filaminana tao Amboangibe mikasika izany fanolanana.
Nihevitra ny fianakaviana fa hizotra tsara ny fanadihadiana satria ny fanolanana dia voasakajy ho isan’ny heloka bevava. Ny volana jolay lasa teo no niakatra Tribonaly tany Antalaha ny raharaha. Akory anefa ny hatairan’ny fianakaviana sy ny mpisolovava fa tsy hita popoka ny antontan-tarasy fitoriana ilay lehilahy izay napetraka tany amin’ny mpitandro ny filaminana sy ny Fitsarana. Niakatra tany amin’ny Tribonaly Antalaha ny raharaha, ny volana jolay lasa teo. Nsy hita popoka anefa ny antontan-taratasy fitoriana natao tamin’ilay raikeliny io. Miaihiahy ny fianakaviana fa nisy ny kolikoly ka nahatonga io raharaha io ho tsy nisy tohiny intsony.
Amin’izao fotoana izao dia mitondra vohoka ary efa ho teraka ilay zazavavy kely. Mandalo fahasahiranana anefa ny renin’ilay zaza sy ny fianakaviana noho ny tsy fahasalaman’ilay zazavavy kely vao 13 taona. Raisin’ny mpitsabo an-tanana ny fanaraha-maso ny momba azy sy ny zaza ao an-kibony noho ny toe-batany tsy mbola mahazaka izany mitondra zaza izany. Mety hisy fahasarotany mantsy ny fiterahana noho ny vohoka aloha loatra.